Ninka Bedelaya Hoggaamiyihii Kooxda Daacish Iyo Dalka Uu Kasoo Jeedo Oo La Ogaaday – somalilandtoday.com
Ninka Bedelaya Hoggaamiyihii Kooxda Daacish Iyo Dalka Uu Kasoo Jeedo Oo La Ogaaday
(SLT-Baqdaad)-Kadib markii uu Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump uu ku dhawaaqay geerida hoggaamiyihii kooxda Daacish, Abuubakar Al-Baqdaadi, ayaa waxay su’aalo badan dul hooganaya cidda la wareegi doonta hoggaaminta kooxdaasi.
Waxa soo if baxaya Warbixino sheegaya in Abuubakar Al-Baqdaadi aanu aheyn mudooyinkii u dambeeyay hogaamiyaha dhabta ah ee sida tooska ah u waday howl-galadii ururka Daacish, balse uu arrimahaasi ku wareejiyay una xil saaray guddi gaar ah.
Sidoo kale Waxa isasoo taraya su’aasha ah, yaa Baqdaadi dabadii ururku u dooran doonaa Hogaamiye?, iyadoona ay soo shaac baxeyso cidda badali doonta, ugana caan ee magaciisa loo adeegsado marka la dhaho yaa badali doona Baqdaadi.
Ciraaq Turkman Abdullah Qardash loona yaqaano ‘Haji Abdullah al-Afri’ ayaa ah Ninka lagu wado in uu noqdo hoggaamiyaha cusub ee Daacish, wuxuuna dhalasho ahaan ka soo jeeda deegaanada Mosoul ee waqooyiga Ciraaq.
Qardash ayaa hore waxa uu Abuubakar Baqdaadi ugu magacaabay ‘Daryeelka xaaladaha Muslimiinta’ sida ay bishii August baahisay wakaalada wararka ee ururkaasi.
Dhinaca kale, Sarkaal ka tirsan gobolka oo dalbaday in la qariyo magaciisa iyo wadanka uu ka soo jeedo ayaa Wargeyska News Week u sheegay in Qardash uu gali doono booskii Baqdaadi.
Sarkaalkaasi ayaa waxa kale oo uu ka dhawaajiyey in Baqdaadi uu ahaa hogaamiye sharafeed aan shaqo ku laheyn howl-galada uu fuliyo ururku, wuxuuna yiri “Baqdaadi waxa uu sameyn jiray oo kaliya doorashada Haa ama Maya, balse shaqo kuma laheyn qorsahah”.